Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 Maarso, 2014, 18:48 GMT 21:48 SGA
Waxaa Sabtidan guul la hoyday dhammaan kooxaha Manchester City, Everton, Fulham, Southampton, Stoke iyo West Brom. Tartamada ENL iyo koobka FA ee maanta
Cayaaraha England Premiership iyo FA Cup
Natiijooyinka horyaalka Ingriiska
Kooxda Chelsea ayaa sii wadanaysa hogaaminka horyaalka Premier League England dhinaca dhibcaha kadib markii ay hal iyo eber kaga badisay kooxda Everton.
22 Febraayo 2014
Tababaraha Man City oo eedeeyay garsooraha
Tababaraha Manchester City ayaa eedeeyay garsooraha kaddib markii ay ka raysay kooxda Barcelona cayaaraha horyaalka Champions League.
19 Febraayo 2014
Cayaarta Man City iyo Barcelona ee Champions League
Fernandinho ayaa dib ugu soo laabtay Manchester City oo ciyaar adag oo ka mid ah Horyaalka Champions League la yeelaneyso Barcelona. 18 Febraayo 2014
Chalsea oo iibsanaysa Maxamad Saalax
Kooxda Chalsea ayaa iibsaneysa cayaaryahanka qadka dhexe ka cayaara ee u dhashay dalka Masar, Maxamad Saalax.
Xalay waxaa dhacay ciyaaro xiisa badan oo ka tirsan horyaalka kubbadda cagta ee dalka Ingiriiska oo haatan maraya meel aad u kulul.
Ribery iyo Benzema oo la maxkamadeynayo
Maxkamadeynta cayaartoyda Faransiiska ee Franck Ribery iyo Karim Benzema, oo lagu eedeeyay inay u galmoodeen haweeney aan qaan gaarin, ayaa waxa ay ka billaabatay magaalada Paris.
21 Janaayo 2014
Waxaa horyaalka dalka ingiriiska Sabtidan guulaystay kooxaha Man City, Arsenal, Newcastle, Norwich iyo Crystal Palace.
18 Janaayo 2014
Siduu ku guulaystay Cristiano Ronaldo?
Ciyaaryahanka weerarka kaga ciyaara kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ka adkaaday labada ciyaaryahan ee Lionel Messi ee u dheela kooxda Barcelona iyo ciyaaryahan Franck Ribery ee u ciyaara kooxda Bayern Munich, waxa uuna ku guulaystay b
14 Janaayo 2014
Xulka ciyaaraha qaboobaha ee SoomaalidaMaqal02:51
Xulka ciyaaraha xeegada ee Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galayaan tartanka xeegada ee lagu ciyaaro barafka korkiisa.
4 Janaayo 2014
Koobka adduunka kooxaha AfrikaMaqal53:31
Shan dal ayaa Afrika u soo baxey cayaaraha koobka adduunka ee sanadka soo socda ee 2014 lagu qaban doono dalka Brazil.
WararkaAasiyaAfrikaAmerikaArgagixisoBariga AfrikaMaqalSiyaasaddaYurubHalkaan ka baar canaawiinta oo dhan A-Z